FIAKARAN’NY RANO AO AMBANJA : Zazalahy 16 taona maty latsaka tanaty tatatra
Miaina ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny vahoakan’Ambanja ankehitriny noho ny firotsahan’ny orana izay tsy misy fitsaharana hatramin’ny omaly. 8 mars 2018
Araka ny loharanom-baovao azo avy any antoerana, omaly, dia zazalahy 16 taona no fantatra fa namoy ny ainy latsaka tamin’ireny tatatra vita amin’ny béton ireny, tany amin’ny lalana mankany Ankify miala kely an’Ambanja. Safotry ny rano ity tatatra ity ka nahalatsaka ilay zaza ary izao niafara tamin’ny fmoizana ny ainy izao. Fantatra fa nanomboka ny alahady lasa teo ny firotsahan’ny orana any an-toerana.
Noho ny hamafin’ izany dia miakatra ny reniranon’i Sambirano ka fokontany maro dobo-drano avokoa ary tafiditra any anaty trano mihitsy izany, araka ny vaovao azo ihany. Misy fiantraikany ratsy amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina izany satria niakatra vetivety ny rano eo ihany koa ny vidim-piainana ao amin’ ny Distrikan’Ambanja ankehitriny. Eo amin’ny fiakaran’ny vidim-piainana izay, na ny hanikotrana izay tena mamokatra any an-toerana aza dia nahitana fiakaram-bidy ihany koa.
Noho ny fiakaran’ny rano ao an-tampon-tanànan’Ambanja ity dia omby tao anaty valan’ olona iray no namoy ny ainy tao amin’ny Fokontany Ambaiboho afak’omaly alina. Tamin’ny orana nanoratanay izao dia mbola mirotsaka ihany ny orana ary tsy mitsahatra miakatra ny reniranon’i Sambirano mandritr’ izany. Hatreto aloha mbola tsy misy kosa ny olona lasan’ny rano na namoy ny ainy noho ny rotsak’orana ao Ambanja.